पुनर्जन्म - Baikalpikkhabar
सुरेन्द्र प्रसाद लामिछाने
रुघा मर्की र खोकीले सिकिस्त भए झैँ भयो
गति बिग्रेछ जिब्रोको खानाको संवाद नै गयो।
खस्खस गर्छ घाँटीमा गतिलै बस्तु पो छ कि?
निस्किदैन कतै पाखा जिब्रो पो बरु खस्छ कि!
तातियो शरीर सारा पसिना पसिना भयो
पसिनासँग हड्डीको तागत मिसियो गयो।
तैपनि भार भारी छ गर्दा शरीर हल्चल
एकान्तबासमा आफैं आफूभित्रको खल्बल।।
सञ्चार मेडिया सुन्दा मनको शक्ति भाग्दथ्यो
निस्किंदैछन् कि आँखाका दाना बाहिर लाग्दथ्यो।
फोनमा भिडियो वार्ता शुभचिन्तकका कुरा
सुन्दा सुनाउँदा लाग्थ्यो भएँछु बिचरा बरा!!
इष्ट मित्र सबै नाता लागि परे जतातता
जडिबुटी नयाँ नौला पाइन्थे ती कताकता?
पकाएर छिटो मीठो छोराछोरी र श्रीमती
ल्याइदिन्थे “लु खानू त” गहमा देख्छु पीर- ती!!
सोध्नेलाई म भन्दथें आराम छु सबै दिन
जे जे भो भित्रभित्रै भो मनोबल घटाईंन।
आराम छु म सन्चै छु भन्दै नि खान छाडिनँ
मुसुक्क मुस्कुराईन्थ्यो पीडाका भाव बाँडिन।
हैजा हो कोरना रोग बाध्यता चेनब्रेक हो
समाज किन हो निन्दा?हटोस तुच्छ बिवेक त्यो।
तोडियो दुई हप्तामा होम आइसुलेसन
पुनर्जन्म भएजस्तै लाग्दैछ किन हो किन?
सोमबार, १७ जेठ, २०७८, दिउँसोको १२:५२ बजे
कमल रिजाल यमपञ्चक शुरु भएपछि तीहार शुरु हुन्छ । दीपावली पनि हो यस पर्वको अर्को नाम । दसैँपछि दोस्रो ठूलो पर्व हो यो । यस पर्वलाई हरेकवर्ष कात्तिककृष्ण त्रयोदसीदेखि कात्तिक शुक्ल द्वितीयातक मनाइन्छ । पाँच दिनसम्म मनाइने भएकाले यमपञ्चक भनिएको
प्रतिष्ठानले गर्यो ६ वटा विधाका पुरस्कार घोषणा दमक, १८ कार्तिक / दमकका साहित्यकारहरुले महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको स्मरण गरेका छन् । महाकवि देवकोटाको १ सय १३ औ जन्मजयन्ती अर्थात लक्ष्मी पूजाको अवसर पारेर देवकोटाको बाल
ए भाइ!! मुग्लिन आइपुगेपछि खबर गर है!!
एउटी बुढी पोखराबाट काठमाडौ जाने बसमा चढी । उनले खलासीलाई बोलाएर भनी, " बाबू मुग्लिन आएपछि मलाई खबर गर है ?" खलासीले ' अ, हुन्छ ' भन्यो । तर बस मलेखु आईसकेपछि खलासीलाई बल्ल बुढीले भनेको कुरा याद आयो ।
प्रदेश १ सरकारले पुरस्कृत गर्ने १८ जना श्रष्टाको नाम सार्वजनिक
दमक, १३ कार्तिक/ प्रदेश १ सरकारले प्रदेशका १८ जना स्रष्टालाई सम्मान गर्न सिफारिस गरिएका नामावलीलाई औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमै वितरण गर्नुपर्ने पुरस्कार वितरण गर्न सकेको थिएन । अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सूचना जारी
ताप्लेजुङको सिरिजङ्घामा ‘एक घर, एक धारा’ अभियान
९ कार्तिक, फुङ्लिङ / ताप्लेजुङको सिरिजङ्घा गाउँपालिका–६ मामाङ्खेमा ‘एक घर, एक धारा’ अभियान सञ्चालन हुने भएको छ । जिल्लाको दुर्गम गाउँ र वडाका रूपमा रहेको मामाङ्खेमा गाउँपालिकाको योजनाअनुसार ‘एक घर, एक धारा’ अभियान सञ्चालन हुने भएको हो । सिरिजङ्घा गाउँपालिकाले
सिँगाने बाख्रीको ब्वाइ फ्रेण्ड : दुङदुङे बोयर बोको
दुङदुङे बोको देखेपछि धेरैको मुखमा पानी आउँछ । यसमाथि कोरली बाख्रीको नआउने कुरै भएन । तर, नश्ल सुधार गर्ने बोकोमाथि नै मान्छे जातको गिद्धे दृष्टि परेपछि भने उखान सम्झाउनै पर्ने हुन्छ । हुलमुलमा जिउ जोगाउनु अनिकालमा बिउ । अब बिउ
सेक्सी फूलको कथा
एजेन्सी / चरामा भँगेरोजस्तै वनस्पतिमा सुनाखरी सबैभन्दा...
‘मेरो जनगणना, मेरो सहभागिता’ नारा सहित १२औं राष्ट्रिय...
यी हुन् विश्वकै कामूक पुरुष
लसएञ्जल्स(अमर उजाला)/ अमेरिकी अभिनेता पल रड विश्वकै कामूक...
वकिल-प्रहरी झडप, बार महासचिवसहित ६ वकिल घाइते
२५ कार्तिक, काठमाडौँ/ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा...
तराईवासीको महान चाड छठको उल्लास, उदाउँदै गरेको सूर्यलाई अर्घ दिएपछि सकियो
२०७८ कात्तिक २५ / उदाउँदै गरेको सूर्यलाई...